Leviticus 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nna kronkron ne afahyɛ ahorow (1-44)
Twam (4, 5)
Paanoo a Mmɔkaw Nnim Afahyɛ (6-8)
Nnɔbae a edi kan a wɔde bɔ afɔre (9-14)
Nnawɔtwe Afahyɛ (15-21)
Ɔkwampa a wɔbɛfa so atwa wɔn nnɔbae (22)
Torobɛntohyɛn Afahyɛ (23-25)
Mpata Da (26-32)
Apata Afahyɛ (33-43)
23 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Yehowa afahyɛ ahorow+ a ɛsɛ sɛ mobɔ no dawuru+ no yɛ nhyiam kronkron. M’afahyɛ ahorow no ni: 3 “‘Monyɛ adwuma nnansia, na da a ɛto so ason no yɛ da a ɛsɛ sɛ mohome koraa;+ ɛyɛ nhyiam kronkron. Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwuma biara. Baabi a mobɛtena biara no, monkae sɛ ɛyɛ Homeda ma Yehowa.+ 4 “‘Eyinom ne Yehowa afahyɛ ahorow a ɛyɛ nhyiam kronkron no; bere no so a mommɔ no dawuru: 5 Bosome a edi kan no da a ɛto so 14 no+ anwummere* yɛ Yehowa Twam Afahyɛ.+ 6 “‘Saa bosome yi da a ɛto so 15 no yɛ Paanoo a Mmɔkaw* Nnim Afahyɛ ma Yehowa.+ Enti munni paanoo a mmɔkaw nnim nnanson.+ 7 Ɛda a edi kan no bɛyɛ nhyiam kronkron ama mo.+ Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwumaden biara. 8 Mmom momfa nnanson mmɔ afɔre a wɔde ogya hyew mma Yehowa. Na da a ɛto so ason no yɛ nhyiam kronkron. Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwumaden biara.’” 9 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 10 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Sɛ munya du asaase a mede rema mo no so na mutwa ɛso nnɔbae a, momfa mo aba a edi kan+ a moaboaboa ano atifi atifi no baako mmrɛ ɔsɔfo no.+ 11 Afei ɔsɔfo no nhim nnɔbae a wɔde abrɛ no no wɔ Yehowa anim na moanya nhyira. Onhim no da a edi Homeda so no. 12 Ɛda a mobɛma wɔahim nnɔbae no, momfa odwennini kumaa a wadi afe mmra mma wɔmfa mmɔ ɔhyew afɔre mma Yehowa. 13 Afei momfa ngo mfɔtɔw esiam muhumuhu efa nkyem du mu abien* mmɛbɔ aduan afɔre huamhuam* a wɔhyew ma Yehowa no. Momfa bobesa hin* nkyem anan mu baako nka ho mmɛbɔ nsã afɔre. 14 Ɛnsɛ sɛ mudi paanoo, mowe nkyewe, anaa mudi baali* a moatwa no foforo no bi kosi da a mode mo afɔrebɔde bɛba mo Nyankopɔn anim no. Baabi a mobɛtena biara, eyi yɛ ahyɛde a mubedi so daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 15 “‘Homeda no akyi da a edi hɔ a mode nnɔbae a moaboaboa ano atifi atifi no baako bɛba abɛbɔ ohim afɔre no, monkan Homeda ason mfi saa da no.+ Ɛsɛ sɛ ɛyɛ nnawɔtwe ason pɛpɛɛpɛ. 16 Monkan nnafua 50,+ na ɛbɛkɔ akosi da a edi Homeda a ɛto so ason no akyi, na momfa nnɔbae foforo nyɛ aduan afɔre mmrɛ Yehowa.+ 17 Baabi a mote biara, momfa paanoo abien mmɛbɔ ohim afɔre. Momfa esiam muhumuhu efa nkyem du mu abien* ntõ paanoo a mmɔkaw wom no,+ na ɛnyɛ aba a edi kan mma Yehowa.+ 18 Momfa adwennini nkumaa ason a wɔte apɔw a wɔn mu biara adi afe ne nantwinini kumaa baako ne adwennini abien nka paanoo no ho mmra.+ Wɔmfa mmɔ ɔhyew afɔre mma Yehowa nka aduan ne nsã afɔre no ho, na ɛnyɛ afɔre huamhuam* a wɔde ogya hyew ma Yehowa. 19 Momfa apɔnkye ba baako mmɔ bɔne ho afɔre+ na momfa adwennini nkumaa abien a wɔn mu biara adi afe mmɔ asomdwoe afɔre.+ 20 Ɔsɔfo no mfa adwennini nkumaa abien no nka paanoo a wɔde aba a edi kan yɛe no ho, na onhim sɛ ohim afɔre mma Yehowa. Ɛyɛ kronkron ma Yehowa, na ɛbɛyɛ ɔsɔfo no dea.+ 21 Saa da no du a, mommɔ dawuru+ sɛ ɛyɛ nhyiam kronkron ma mo. Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwumaden biara. Baabi a mobɛtena biara, eyi yɛ ahyɛde a mubedi so daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 22 “‘Sɛ moretwa mo asaase so nnɔbae a, munntwa nea ɛwɔ afuw no anoano no nyinaa, na monnsesaw nea aka ase no.+ Munnyaw mma ahiafo*+ ne ahɔho a wɔabɛsoɛ mo mu no.+ Mene Yehowa mo Nyankopɔn.’” 23 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 24 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Bosome a ɛto so ason no da a edi kan no, monhome koraa. Ɛyɛ nhyiam kronkron a wɔbɛhyɛn torobɛnto de abɔ no dawuru.+ 25 Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwumaden biara, mmom mommɔ afɔre a wɔde ogya hyew mma Yehowa.’” 26 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 27 “Bosome a ɛto so ason yi da a ɛto so du no de, ɛyɛ Mpata Da.+ Ɛyɛ nhyiam kronkron ma mo; munni awerɛhow,*+ na mommɔ afɔre a wɔde ogya hyew mma Yehowa. 28 Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwuma biara saa da yi, efisɛ ɛyɛ da a wɔbɛpata ama mo+ wɔ Yehowa mo Nyankopɔn anim. 29 Obiara* a wanni awerɛhow* saa da no, wobekum no.*+ 30 Na obiara* a ɔbɛyɛ adwuma biara saa da no, mekum no. 31 Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwuma biara. Na baabi a mobɛtena biara, eyi yɛ ahyɛde a mubedi so daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 32 Ɛyɛ da a mobɛhome koraa, na bosome no da a ɛto so akron no anwummere no, munni* awerɛhow.+ Munni homeda no mfi anwummere nkosi anwummere.” 33 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 34 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Bosome a ɛto so ason yi da a ɛto so 15 no yɛ Apata* Afahyɛ ma Yehowa, na nnanson na mode bedi.+ 35 Ɛda a edi kan no yɛ nhyiam kronkron, na ɛnsɛ sɛ moyɛ adwumaden biara. 36 Momfa nnanson mmɔ afɔre a wɔde ogya hyew mma Yehowa. Ɛda a ɛto so awotwe no yɛ nhyiam kronkron ma mo,+ na mommɔ afɔre a wɔde ogya hyew mma Yehowa. Ɛyɛ nhyiam titiriw. Ɛnsɛ sɛ moyɛ adwumaden biara. 37 “‘Eyinom ne Yehowa afahyɛ ahorow+ a ɛsɛ sɛ mobɔ no dawuru sɛ ɛyɛ nhyiam kronkron+ a mobɛbɔ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa: ɔhyew afɔre+ ne aduan afɔre+ ne nsã afɔre+ sɛnea wɔahyehyɛ ama da biara. 38 Eyinom nyinaa akyi no, mode afɔre a mobɛbɔ no Yehowa home nna,+ mo akyɛde,+ mo bɔhyɛ afɔre,+ ne mo ayamye afɔre+ a mode bɛma Yehowa no nso bɛba. 39 Nanso bosome a ɛto so ason no da a ɛto so 15, bere a moaboaboa mo asaase so nnɔbae ano no, munni Yehowa afahyɛ no nnanson.+ Ɛda a edi kan ne da a ɛto so awotwe no, ɛsɛ sɛ mohome koraa.+ 40 Ɛda a edi kan no, mompɛ nnua fɛfɛ so aba ne berɛw+ ne dua mmaa a ahaban wɔ so kusuu ne nsuano nnua, na munni ahurusi+ nnanson wɔ Yehowa mo Nyankopɔn anim.+ 41 Ɛyɛ Yehowa afahyɛ a ɛsɛ sɛ mudi no nnanson afe biara.+ Eyi yɛ ahyɛde a mubedi so daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu; bosome a ɛto so ason mu na munni afahyɛ yi. 42 Montenatena apata ase nnanson.+ Ɛsɛ sɛ Israel man mma nyinaa tenatena apata ase, 43 sɛnea ɛbɛyɛ a mo nkyirimma behu+ sɛ bere a miyii Israelfo fii Egypt asaase so no, apata ase na mema wɔtenatenae.+ Mene Yehowa mo Nyankopɔn.’” 44 Ɛnna Mose kaa Yehowa afahyɛ ahorow no ho asɛm kyerɛɛ Israelfo no.
^ Anaa “momma mo kra nni awerɛhow.” “Awerɛhow” a wɔreka ho asɛm wɔ ha no, nkurɔfo te ase sɛ, obi de nneɛma bi bɛkame ne ho, na wakyen ne ho kɔm mpo.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wanyɛ akɔnkyen.”
^ Anaa “momma mo kra nni.”